भिडियोफोन्सको साथ डिमेन्शियाको जोखिम रोक्न मद्दत गर्नुहोस् - Konnekt
डिमेंशिया रोकथाम गर्नुहोस्
24 / 08 / 2018 यूहन्ना
डिमेन्शियालाई क्रूर रोग भनियो किनकि यसले दुई व्यक्तिको मृत्यु गर्दछ: व्यक्तित्वको ढिलो लोप, जीवनबाट प्रस्थान पछि।
2016 मा, डिमेंशिया बन्यो मृत्युको प्रमुख कारण महिलाहरूको बीचमा, हृदय रोगलाई पनि पार गर्दै।
बारेमा 10% over-65s, 30% over-85s को, र 52% वृद्ध-देखभाल निवासीहरूको पागलपन छ
पागलपन हो अशक्तताको एकल सबैभन्दा ठूलो कारण वरिष्ठ र मा 3rd अशक्तताको बोझको प्रमुख कारण.
यदि तपाईको परिवारको सदस्य पागल छ भने, तपाई CAN धेरै फरक पार्नुहोस्। मा पढ्नुहोस्
प्रभावकारी समर्थन पुरस्कृत छ
डिमेन्शियासँग अभिभावकलाई सहयोग गर्नु गाह्रो र दर्दनाक हुन सक्छ, तर यो इनामदायी पनि हुन सक्छ। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरु डा। टी। इनागाकी र डा 2016 CDPS लेख कि जब समर्थन भएको मानिन्छ प्रभावकारी, समर्थन पनि गर्न सक्छन् हेरचाहकर्तालाई फाइदा, कम तनाव, खुशी वृद्धि, र सामाजिक जडानको बृद्धि को नेतृत्व।
यसले तपाईंको दृष्टिकोणमा शक्तिशाली प्रभाव पार्न सक्दछ।
यस लेखले तपाईलाई विश्वास दिलाउँछ कि तपाइँको सामाजिक संलग्नता तपाईंको प्रियजनको साथ महत्त्वपूर्ण छ - विशेष गरी यदि उनीहरूलाई जोखिममा छ भने dementia.
अध्ययन: भिडियो कुराकानीले संज्ञानात्मक समारोह सुधार गरियो
अनियमित अध्ययनले त्यो वेब-आधारित देखायो अनुहारको सामना कुराकानीले केवल6हप्ता पछि संज्ञानात्मक समारोहमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्‍यो। सहभागीहरूको औसत उमेर 80.5 वर्ष पुरानो थियो। यसको विपरित, कन्ट्रोल समूह, जसले एक हप्तामा एक पटक अडियो-मात्र टेलिफोन अन्तर्क्रिया गर्दछ, सुधारको अनुभव गरेन। यस परिणामले सुझाव दिन्छ कि भिडियो कुराकानीले संज्ञानात्मक कार्यहरू बढाउन सक्छ र डिमेंशियाको सुरुवातमा ढिलाइ गर्दछ।
ग्राउण्ड ब्रेकिंग निष्कर्षको विवरण अनुसन्धान पत्र 2015 मा प्रकाशित भयो र ओरेगन स्वास्थ्य तथा विज्ञान विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, मियामी विश्वविद्यालय र पोर्टलैंड वेटरन्स अफेयर्स मेडिकल सेन्टरका अग्रणी वैज्ञानिकहरूको सह-लेखक।
सहभागीहरूलाई क्लिनिकल डिमेन्शिया रेटिंग (CDR) भनिने मान्यता प्राप्त डिमेंशिया मेट्रिकमा मूल्या .्कन गरिएको थियो। तिनीहरू स्केलमा0र 0.5 को बीच मापन गरियो, जहाँ0सामान्य (उमेरका लागि) र 0.5 लाई हल्का संज्ञानात्मक कमजोरी (MCI) को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। आधा सहभागीहरू डिमेन्शिया (CDR = 0) बिना चयन गरिएको थियो र आधा सहभागीहरू हल्का पागलपनका साथ चयन भए।
"अघि र पछाडि" संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोरहरू र एकाकीपन स्कोरहरू हस्तक्षेप समूह र नियन्त्रण समूह बीच तुलना गरिएको थियो।
77% बाट 100% दैनिक अनुपालन (औसत: 89%) को साथ दैनिक कुराकानी तालिकाको पालना एकदम उच्च थियो। त्यहाँ बिल्कुल कुनै ड्रप-आउटहरू जे भए पनि। यस्तो उच्च स्तरको पालना प्राप्त गर्न मद्दतको लागि,aठूलो टचस्क्रीन मोनिटर र ए प्रयोगकर्ता मैंत्री ईन्टरफेसलाई विशेष ध्यान दिइयो। लेखकहरूले टिप्पणी गरे कि अन्य उत्तेजक विधिहरू जस्तै खेल-आह्वान संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, अनुहार-देखि-अनुहार कुराकानी बढी प्राकृतिक, बढी आकर्षक र कम प्रेरणा आवश्यकता छ।
MCI (हल्का पागलपन) को साथ सहभागीहरू सुधारिएको तिनीहरूको साइकोमोटर गतिमा आकलनहरू प्रयोग गर्दै जसमा कोगस्टेट पत्ता लगाउने परीक्षणहरू, साथै ट्रेल बनाउने A परीक्षण पनि समावेश थियो।
संज्ञानात्मक अक्षुण्ण सहभागीहरू (पागलपन बिना) उल्लेखनीय सुधार6हप्तामा लिइएको सेमान्टिक फ्लुनेस टेस्टमा (तुरुन्त परीक्षणको अनुसरण पछि)। सुधार पनि भएको छ टिकाऊ, 18 हप्तामा लिइएको फोनमिक फ्लुनेसी परीक्षण द्वारा मापन गरिएको (12 हप्ता परीक्षण समाप्त भएपछि)। भाषा-आधारित कार्यकारी मस्तिष्क प्रकार्यमा नतिजा सुधारहरूले सुझाव दिन्छ कि वेब-आधारित अनुहार-देखि-अनुहार कुराकानी घर-आधारित को लागी एक लागत-प्रभावी प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिमेंशिया रोकथाम.
वेब आधारित कुराकानीले कार्य गर्दछ - र परिणामहरू पछि देखाउँदछ केवल6हप्ता! यो परिवारका सदस्यहरूका लागि धेरै टाढा भेट्नको लागि एकदम ठूलो समाचार हो, धेरै व्यस्त, स्रोतहरूको अभाव वा अक्सर यात्रा गर्न असमर्थ।
दिनमा केवल 30 मिनेट अनुहार-देखि-अनुहार समय को प्रभावी देखाइएको थियो। त्यसो भए, उदाहरणका लागि, भिडियो कलहरू हप्तामा दुई पटक, प्रत्येक 3-4 परिवार सदस्यका साथ, यो लिन्छ।
ती डिमेन्शिया सहित र बिना लाभान्वित यदि तपाईंसँग वृद्ध आफन्तहरू एक्लै वा सुविधा भित्रै बस्नुहुन्छ भने, मेमोरी हराउन सुरु नहुनुहोस्।
अडियो मात्र अन्तर्क्रिया गर्दछ छैन उस्तै लाभ उत्पादन गर्नुहोस् (हामी किन तल वर्णन गर्दछौं)। हामी "ट्रेड-अप" वा भिडियो फोनको साथ नियमित टेलिफोन बढाउन सुझाव दिन्छौं।
प्रकाशित अध्ययनहरूले संकेत गर्दछ कि उमेरको साथ, भावनात्मक मनसाय मद्दत ड्राइव सment्लग्नता र बढि परिणामहरू। यसले भिडियो कुराकानीको सुझाव दिन्छ परिवार र साथीहरूको साथ, स्टाफ र अपरिचितसँग कुराकानीको तुलनामा, पालन र सकारात्मक परिणामहरू निश्चित गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
अधिक, राम्रो। भर्खरको एमआरआई अध्ययनले लि link्क गर्दछ सामाजिक नेटवर्क को आकार खैरो पदार्थको घनत्व र amygdala भोल्यूमको साथ। यसले सेटअप गर्न को लागी सुझाव दिन्छ धेरै परिवार र साथीहरु सम्भव भएसम्म भिडियो कुराकानीमा भाग लिन।
A ठूलो टच स्क्रीन प्रयोगकर्ता मैंत्री इन्टरफेस स्वीकार्यता र पालनको लागि कुञ्जी हो। डिमेन्शियाको सामना गरिरहेका अधिकांश वरिष्ठहरू आईप्याड वा ट्याब्लेटको साथ संघर्ष गर्न सक्दछन्। तिनीहरूलाई प्रयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण आवश्यक पर्दछ, जस्तै एक भिडियो फोन विशेष गरी बुजुर्गहरूको लागि डिजाइन गरिएको जुन र पागलपनको साथ।
रोकथाम र उपचारको लागि सिफारिस
अध्ययनका लेखकहरूले सुझाव दिए कि प्रयोगकर्ता-मैत्री भिडियो कुराकानी संज्ञानात्मक गिरावटको बिरूद्ध उपयोगी घर-आधारित रोकथाम दृष्टिकोण हुन सक्छ। अध्ययन नेतृत्व गरिएको थियो प्रोफेसर हिरको डज ओरेगन हेल्थ एण्ड साइंस युनिभर्सिटी (ओएचएसयू) र मिशिगन युनिभर्सिटीमा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) द्वारा वित्त पोषण गरिएको थियो।
अमूर्त पढ्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् मूल कागज.
Konnekt पहिलो हातले समान परिणामहरू देखेका छन् (तर नियन्त्रणित अध्ययनमा छैन)। हामी विश्वास गर्दछौं कि यसले हाम्रा बुढापाका आफन्तहरूको हेरचाह गर्ने तरिकामा क्रान्ति ल्याउँदछ - दुबै स्वतन्त्र रूपमा बस्ने र आवासीय वृद्ध हेरचाह भित्र रहेका व्यक्तिहरू।
नयाँ अध्ययनले लामो अवधिको लाभ मापन गर्दछ
माथिको अध्ययनको नतीजा यति सकारात्मक थिए कि डा। हिरोको डज र उनका साथीहरूले हाल २-नयाँ फलो-अप अध्ययनहरू गरिरहेछन् जुन लामो-अवधिको स्वास्थ्य नतीजाहरू मापन गर्दछन्। यी अध्ययनहरूले Alzheimer's Disease (AD) शुरुआत र MCI (हल्का संज्ञानात्मक कमजोरी) को साथ वरिष्ठको संज्ञानात्मक गिरावट मा ढिलाइ मा अनुहार-देखि-अनुहार वेब-आधारित कुराकानीको प्रभाव मापन छ। यी अध्ययनहरू पनि युएस राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानहरूको एक प्रभाग, एजिंगमा राष्ट्रिय संस्थान द्वारा वित्त पोषित छन्।
सम्बन्धित अनुसन्धान: सारांशहरू पढ्नुहोस्, मूल कागजातहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, र हाम्रो आफ्नै 2018 सम्मेलन प्रस्तुतीकरण वृद्ध सामाजिक अलगावमा हेर्नुहोस्।
डिमेन्शिया शुरुआतमा कसरी ढिलाइ गर्ने वा डिमेन्शिया जोखिम कम गर्ने
स्वास्थ्य पेशेवरहरूले पनि सिफारिस गर्छन्:
स्वस्थ आहार: मिठो खाना र परिष्कृत कार्ब्स काट्नुहोस्। प्रशोधित खाद्य पदार्थ सीमित गर्नुहोस्। ट्रान्स फ्याटबाट बच्नुहोस्। ओमेगा-एक्सएनयूएमएक्स फ्याट बढाउनुहोस्। फलफूल र तरकारीहरूको आनन्द लिनुहोस्। 3-2 कप चिया दैनिक पिउनुहोस्। कम से कम मदिरा राख्नुहोस्।
किन यो काम गर्दछ: अत्यधिक तौलले अल्जाइमरको जोखिमलाई डबल गर्दछ। सही खानाले सूजन कम गर्न सक्छ, जसले न्यूरन्सलाई घाइते गर्दछ, र मधुमेहको जोखिम कम गर्दछ, जसले मस्तिष्क कोषहरू बीच सञ्चारमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। थप रूपमा, स्वस्थ बोसोले बीटा-एमाइलोइड प्लेकहरू कम गर्न सक्छ।
रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुहोस्: नियमित रूपमा जाँच गर्नुहोस् र डाक्टरको आदेश पालन गर्नुहोस्।
किन यो काम गर्दछ: उच्च रक्तचाप संवहनी मनोभ्रंशसँग जोडिएको छ।
नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुहोस्: 150 मिनेट मध्यम तीव्रता व्यायाम एक हप्ता, शक्ति प्रशिक्षण संग कार्डियो संयोजन।
किन यो काम गर्दछ: व्यायामले पुरानो जडानहरू कायम राख्न र नयाँ बनाउनको लागि मस्तिष्कको क्षमतालाई प्रोत्साहित गर्दछ।
धूम्रपान छोड्नुहोस्: Over 65 बर्ष भन्दा बढी धूम्रपान गर्नेहरूलाई अल्जाइमरको 80०% बढी जोखिम हुन्छ।
किन यो काम गर्दछ: सुधारिएको रक्तसञ्चारले दिमागलाई तुरुन्तै फाइदा पुर्‍याउँछ।
अवसाद प्रबन्ध गर्नुहोस्: डिप्रेशनको लक्षणहरू पहिचान गर्नुहोस् र उपचारका लागि स्वास्थ्य पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
किन यो काम गर्दछ: डिप्रेसन एपिसोडले दिमागमा शारीरिक प्रभाव पार्छ। डिप्रेसन डिमेंशिया जोखिमसँग जोडिएको छ।
राम्रो संग सुत्न: हामी मध्ये धेरैलाई 8 घण्टा निद्रा चाहिन्छ। यदि तपाईं खर्राटे हुनुभयो भने, निद्रा एपनियाको लागि स्क्रीनिंग पाउनुहोस्। नियमित निद्रा तालिका राख्नुहोस्। प्रारम्भिक दिउँसोमा 30 मिनेटमा naps सीमित गर्नुहोस्। निद्रा भन्दा2घण्टामा टिभी, कम्प्युटर, मोबाइल र उज्यालो बत्तीहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
किन यो काम गर्दछ: कम निन्द्राले बीटा-एमाइलोइडको उच्च स्तरमा पुर्‍याउँछ। गहन निद्रा मेमोरी गठनको लागि आवश्यक छ।
मानसिक उत्तेजना: केहि नयाँ सिक्नुहोस्। पजल र खेलहरूको आनन्द लिनुहोस्। अभ्यास याद गर्नुहोस्। आफ्नो दैनिक बानी फरक पार्नुहोस्।
किन यो काम गर्दछ: व्यायाम जस्तै, मानसिक उत्तेजनाले संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्दछ। गतिविधिहरू बहु कार्यहरू समावेश गर्दछ वा आवश्यक छ सञ्चार र अन्तर्क्रिया सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा प्रस्ताव। यस कारणका लागि, सामाजिक संलग्नता मानसिक उत्तेजनाको उत्तम रूप हो।
सामाजिक संलग्नता: अरूसँग मौखिक संचारले मेमोरी, भाषिक कौशल, ध्यान, कार्यकारी समारोह र अमूर्त तर्क अभ्यास गर्दछ। आमने सामने सञ्चारले दृश्य प्रसंस्करण र बान्की पहिचान, अनुहारको आन्दोलन र अर्थ र भावना व्यक्त गर्ने शरीर भाषाको व्याख्या, र साइकोमोटर सीपसँग जोडेको इशाराहरू र आन्दोलनको समन्वित प्रयोगको व्यायाम गरेर यसमा उल्लेखनीय जोड दिन्छ।
किन यो काम गर्दछ: एक्लो पजलले भन्दा दिमागको अधिक व्यायाम गर्ने स्पष्ट फाइदाहरू बाहेक, सामाजिक संलग्नता परिवार र साथीहरूको साथ माथिको अन्य सिफारिसहरूको प्रत्येकलाई हिट गर्न सकिन्छ:
हामी स्वस्थ आहार र व्यायाम बानी राख्न, औषधीको पालना, डिप्रेशन एपिसोडहरू, र डाक्टरको अर्डरहरू पालना गर्ने सम्भावना बढी गर्दछौं। हामी हाम्रो साथीहरूलाई कसरी हेर्छौं भनेर ख्याल राख्छौं; तिनीहरू साँच्चिकै हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल राख्छन्; र समाजीकरणमा अक्सर कोर्सि,, आन्दोलन र अन्य शारीरिक गतिविधि समावेश हुन्छ।
हामी राम्रो स्लीप बान्की राख्न सम्भावना बढी छ। सामाजिक अपोइन्टमेन्टहरू दिनको लागि जागा रहन आवश्यक छ र हामीलाई रातको लागि थाक्न मद्दत गर्दछ।
संक्षिप्तमा, आमने सामने सामाजिक संलग्नता is अत्यावश्यक डिमेंशिया वा डिमेन्शिया जोखिममा भएकाहरूका लागि। यो मस्तिष्क को प्रमुख क्षेत्रहरु व्यायाम, र सकारात्मक अन्य प्रमुख जोखिम कारकहरु लाई प्रभावित गर्दछ।
प्राप्त Konnekt सेताे कागज बारेमा 8 तरीकाले पागल उमेरकालाई डिमेन्शियासँग मद्दत गर्ने.
अल्जाइमर रोग (यूएसए) लाई रोक्दै | डिमेंशिया अष्ट्रेलिया | तपाईंको मस्तिष्कको मामला | डिमेंशिया गाइड (युके)
डिमेन्शियाको लागि भिडियो
भिडियोफोन उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ अनुहारको सामना सामाजिक संपर्क
अनुहार-देखि-अनुहार सामाजिक अन्तरक्रिया बढ्नु एक आशाजनक हस्तक्षेप हुन सक्छ संज्ञानात्मक समारोह सुधार
अविश्वसनीय सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उपयोग र पालन लाई बढावा दिन्छ
डिमेंशिया र जोखिममा भएकाहरूका लागि विशेष गरी बनाइएको
भिडियोफोनले स्वचालित रूपमा विश्वासको कलरहरूलाई जवाफ दिन सक्छ, मानसिक शान्तिको लागि
थप उपयोगी अनुसन्धान / अध्ययन
सामाजिक अलगाव डिप्रेसन, कम निन्द्रा, उच्च रक्तचाप, गिरावट कार्यक्षमता र विकृतिसँग जोडिएको छ। हाम्रो सजिलो सारांश पढ्नुहोस् वा मौलिक कागजातहरू डाउनलोड गर्नुहोस् बुजुर्ग सामाजिक अलगाव.
तपाईंको परिवारको सदस्य वा ग्राहकलाई सहयोग गर्नुहोस्
बारेमा थप जान्न Konnekt पागलपनको लागि भिडियोफोन। तपाईंको ग्राहक वा परिवारको सदस्यको लागि भिडियोफोन परीक्षण गर्न, साधारण रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामी बाँकी गर्छौं।
अघिल्लो पोस्ट वरिष्ठ घर सुरक्षा अर्को पोस्ट मेमोरी कसरी सुधार गर्ने - W तरिकाहरू
5 टिप्पणी. नया छोड्नुहोस्
ब्रिटेनबाट: एक्सेटर विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले नर्सि home होमका बासिन्दाहरूको दैनिक सामाजिक अन्तर्क्रियामा (जो डिमेन्शिया थियो) लाई2मिनेटबाट 10 मिनेटमा बढायो। यसले राम्रो सुधार गर्यो र यसको निरन्तर लाभ भयो! अध्ययनले 280 बासिन्दाहरू र नौ महिना भन्दा बढी 24 केयर होममा केयर स्टाफ संलग्न गर्‍यो।
यो दैनिक सामाजिक अन्तरक्रियाको महत्त्वको थप प्रमाण हो!
यहाँ पढ्नुहोस्: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/uoe-jtm072518.php
मेरो छोरो केवल एक्सएनयूएमएक्स मात्र थियो जब युवा डिमेन्शियाको साथ पत्ता लाग्यो उसको शरीरमा खानपान र व्यायाममा दैनिक स्वस्थ थियो जुलाई 42 30 उमेरको 2018 सबैभन्दा भयानक रोग
म तपाईंको घाटाको बारेमा सुनेर धेरै दु: खी छु, क्यारोल। हाम्रो लेखमा जवाफ दिन समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। मेरो आफ्नै आमा उनको अन्तिम दुई वर्षमा डिमेन्शिया थियो र यो हामी सबैको लागि गाह्रो समय थियो। उनी दुई व्यक्ति मध्ये एक थिईन् ... म कसरी यो भन्न सक्छु ... सुरुको कारणहरू Konnekt, र किन हामी पागलपनको सामना गर्ने अन्यलाई मद्दतको लागि भावुक छौं। म यो सोच्न सक्दिन कि यो कसरी छोराको डिमेन्शियामा गुमाउनुपर्दछ।
मैले यहाँ धेरै अन्य परिवारका कथाहरू साझेदारी गरेको छु: https://www.konnekt.com.au/testimonials/
कुनै पनि मस्तिष्क कुहिरोबाट पीडित, मेमोरी नोक्सानी ,,, डिप्रेसन, झर्ने, कम्पनहरु, निगलने समस्याहरु, असंयम एक भिटामिन बी १२ को कमीको लागि जाँच गर्नु पर्छ। नर्सि in होमहरुमा कतिपय मानिसहरु स्क्रीनिंग गरिएको छ भने, र उपचार गरीएको हुन्छ घर मा घर फर्कन। आफ्नै वातावरणले सम्पूर्ण जीवन बिताउँछ। दुर्भाग्यवश चिकित्सा ज्ञानको कमी र त्रुटिपूर्ण कम दायराको सीरम भिटामिन बी १२ को कारणले विश्वव्यापी महामारी देखा परेको छ। जापानमा 12०० भन्दा कम सीरम बी १२ लाई एकदम थोरै डिमेन्शियाको रूपमा उपचार गरिन्छ ।अस्ट्रेलियाको तुलनामा। कम श्रेणी B12 १ 12 pmol / l मा कम आएको छ र केहि प्रयोगशालाहरुमा जो भयानक छ। मेरो हब्बी र म दुबै स्थायी नर्व क्षतिको पीडित छु। गलत निदानको कारण र विनाश भिटामिन बी १२ को कमीका कारणहरू हेर्न b500awareness.org मा भिडियो हेर्नुहोस्। वृद्ध मात्र होइन तर युवा लोकमा पनि।
लेख्न को लागी धन्यवाद।
मसँग एक चिकित्सा पृष्ठभूमि छैन तर मेरो पढाइले तपाईंको अवलोकनको पुष्टि गर्दछ, निम्न अनुसार:
१. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, बी १२ को "तल्लो स्तर" १ 1० र २12 बेलुका / एल भन्दा फरक हुन्छ, जबकि अष्ट्रेलियामा, अधिकांश सीरम प्रयोगशालाहरू "कम तह" २२० बेलुका / एलको लागि परीक्षण गर्छन्।
2। उमेर (> 12 बर्ष) सँग B65 अभावको घटना बढ्छ।
3। B12 अभावका लक्षण र लक्षणहरूले डिमेन्शिया, साथै उदासीनता, थकान र व्यक्तित्व परिवर्तन समावेश गर्न सक्दछ।
4। त्यहाँ अब दिशानिर्देशहरू छन् जसले B12 स्तर परीक्षण सिफारिस गर्दछ जहाँ वृद्ध बिरामीहरूमा MCI वा डिमेन्शियाका संकेतहरू छन्।
5। 15% र 40% बिचमा कम सीरम B12 पठनका बिरामीहरूसँग वास्तवमै B12 अभाव हुँदैन थप अनुसन्धानमा। नतिजाको रूपमा, एक अपेक्षाकृत नयाँ परखले अब सक्रिय भिटामिन B12 स्तरहरू मापन गर्दछ।
B. B6 लाई अधिक मात्रामा लिनको लागि यो एकदम दुर्लभ छ। (यो केहि भिटामिनको विपरित हो, जस्तै भिटामिन ए, जहाँ उच्च खुराकले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ)। तपाईंले सिफारिस गरिएको दैनिक आवश्यकतालाई १,००० पटक लिन आवश्यक छ।
7। डाइट्री भिटामिन B12 जनावर उत्पादनहरू (दुग्ध, मासु, अण्डा, माछा र समुद्री खाना) बाट लिइएको हो। धुवाँ, कपडा नहालेको, सुक्खा shitake मशरूम (धेरै जसो अन्य प्रकारको विपरीत), किण्वित सोयाबीन (विशेष गरी पात), र सुख्खा बैजनी लेभर (नोरी, वा शैवाल) मा पाइने ब्याक्टेरियाहरूबाट थोरै रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ।
8। लेखका लेखकहरू छक्क परे कि शाकाहारीहरू र मदिराको दुर्व्यसनलाई नयाँ दिशानिर्देशहरूमा उल्लेख गरिएको छैन।
9। त्यहाँ दुई फरक एकाइहरू छन् (जस्तै मेट्रिक सेमी र इम्पीरियल ईन्च) B12 सीरम स्तर मापन गर्नका लागि: pmol / l र pg / ml। सावधान हुनुहोस् तिनीहरूलाई नमिसाउनको लागि।
10। जापानले यसको B12 संदर्भ दायरालाई 500 - 1300 pmol / l मा 1980 मा बढायो।
११. केही अनुसन्धान अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि केहि अवस्थाहरूमा, बी १२ को कमीले वृद्ध बिरामीहरूमा उल्टाउन योग्य डिमेन्शिया हुन सक्छ (अल्जाइमर रोगले गर्दा पागलपन भन्दा एकदम फरक)।
अष्ट्रेलिया: https://www.healthed.com.au/clinical-articles/vitamin-b12-deficiency/ र https://mthfrsupport.com.au/2015/03/vitamin-b12-reference-range-level-set-low/
संयुक्त राज्य अमेरिका: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681626
मेरो यो लिनुहोस्: तपाईंको स्वास्थ्य चिन्ताको बारेमा सँधै जीपी / चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। सम्मानित मेडिकल वेबसाइटहरू पढ्नुहोस्, तर तपाईले इन्टरनेटमा पढ्नुभएको सल्लाहमा कहिल्यै पनी भरोसा राख्नुहुन्न। यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ वा तपाईं धेरै मात्रामा रक्सी खान्नुहुन्छ भने, आफ्नो चिकित्सकलाई बताउनुहोस्; ऊ / उनीले B12 सप्लीमेन्ट सिफारिश गर्न सक्दछन्। हामी मध्ये धेरै जसो, धेरै जसो समयका लागि, हामी हाम्रो डाईटमा पर्याप्त B12 भन्दा बढि पाउँछौं।
मेरो अस्वीकरण दोहोर्याउन: म एक चिकित्सा पृष्ठभूमि छैन। मेडिकल सल्लाहका लागि सँधै तपाईको जीपी / चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।